Umzi mveliso wokuhamba wase-US kufuneka ujongane nezikhewu ekubonakaleni kwexabiso, ukhuseleko lwe-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Umzi mveliso wokuhamba wase-US kufuneka ujongane nezikhewu ekubonakaleni kwexabiso, ukhuseleko lwe-COVID-19
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukubambisa • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
E-US, ezona zinto zibalulekileyo zokwakha ukuthembela kwabathengi kwiiarhente zohambo kunye nabanikezeli ngezohambo, njengeenqwelomoya, abanazo 'iindleko ezifihlakeleyo' kunye 'neemveliso eziguquguqukayo ngokupheleleyo okanye ezibuyiswayo'.
Uninzi lwabahambi baseMelika abathathe inxaxheba kolu phando bathi ishishini lokuhamba liqhube kakuhle ekuphumezeni amanyathelo ezempilo nokhuseleko e-COVID-19.
I-35% yabahambi baseMelika baxele ukuba ngoku bayazithemba iinkampani zohambo ukuba zisebenzise ulwazi lwabo ngendlela eyiyo.
Uphando luye lwaveza ubungqina bokuba ukuthembela kuchaphazela ngokuthe ngqo indlela yokuziphatha yokuthenga.
Ngokophando olutsha oluzimeleyo, ishishini lokuhamba linokukhuthaza ukubuyiswa kwehlabathi ngokujongana nezikhewu zabathengi ekucaciseni amaxabiso, ezempilo ze-COVID-19, ukhuseleko lwedatha kunye nokuthembeka kolwazi.
Izikhewu ezine zeTrust
Uphononongo lwabahambi abali-11,000 kumazwe ali-10, kubandakanya i-1,000 20 e-United States, lwaluqhutywa ngu-Edelman Data & Intelligence (DxI), uphando nengalo yohlalutyo ka-Edelman, efunde ukuthembela ngaphezulu kweminyaka engama-64 nge-Edelman Trust Barometer. E-US, ityhila ezona zinto zibalulekileyo zokwakha ukuthembela kwabathengi kwiiarhente zokuhamba kunye nabathengisi bokuhamba, njengeenqwelomoya, abanazo 'iindleko ezifihlakeleyo' (55%) kunye 'neemveliso eziguquguqukayo ngokupheleleyo okanye ezibuyiswayo' (67%). Ngelishwa, uninzi lwabahambi ngoku babona ukusebenza kweshishini kwezi ndawo zombini ukuba zihlwempuzekile (61% kunye ne-31% ngokwahlukeneyo). Abahambi baseMelika babephakathi kwabona bantu baphoxeke kakhulu, benendawo ebalulekileyo yeepesenti ezingama-16 neye-XNUMX phakathi kokubaluleka nokusebenza kula manqaku mabini ngokwahlukeneyo.
2. COVID-19 Impilo & Nokhuseleko
Uninzi (52%) lwabahambi baseMelika abathathe inxaxheba kolu phando bathi ishishini lokuhamba liqhube kakuhle ekuphumezeni amanyathelo ezempilo nokhuseleko e-COVID-19. Ukuqhubela phambili, nangona kunjalo, malunga nesiqingatha sathi bangathanda ukuqinisekiswa ngakumbi malunga nokuba amanyathelo athile anyanzeliswa kangakanani, ngakumbi ukuphuculwa komoya wokucoca umoya, ukudambisa intlalontle kunye nokulawulwa kwebhodi kunye nokuma emgceni.
3. Iinkcukacha zabucala
Ubumfihlo beDatha yenye into ephambili eboniswe luphando. Ngaphantsi kwesine kwabali-10 babahambi baseMelika (iipesenti ezingama-35, xa kuthelekiswa nama-40% kwihlabathi liphela) baxele ukuba okwangoku bayazithemba iinkampani zohambo ukuba zisebenzise iinkcukacha zazo ngendlela eyiyo. Ehlabathini jikelele, oku bekucaca ngakumbi phakathi kwabantwana abasebusayo boomers (33%) kunye noGen Z (36%) abaphendulayo.
Xa kuziwa ekusebenziseni ulwazi ukwenza amava akho, abahambi e-US bathi bakhululekile kwiinkampani ezisebenzisa idatha abaye babelana ngayo ngokuthetha nomntu omnye (46%), indlela yokubhukisha eyadlulayo (44%) kunye Umsebenzi wokunyaniseka (44%). Abakhululekanga kangako, nangona kunjalo, xa ulwazi lufunyanwa ngokungathanga ngqo, umzekelo, kwimisebenzi yemidiya yoluntu (26%), iirekhodi zikarhulumente ezinje ngamanqaku emboleko (31%) kunye nokuthenga kwangaphambili, ukukhangela kunye nokuziphatha kokubhukisha kunye nezinye iinkampani (35%).
4. Ukuthembeka kolwazi
Ngokophando, owona mthombo uthembekileyo wolwazi olunxulumene nokuhamba olusetyenziswa ngabakhenkethi e-US xa bephanda ngohambo ngabo babonwa ukuba banomdla ongqinelanayo: izihlobo kunye nosapho (73%), kunye nomthombo othembekileyo olandelayo wewebhusayithi yokujonga kwakhona iza ngasemva kakhulu (46%). Ngokwahlukileyo, abona bathembeki kancinci ngabo banomdla ocacileyo wokuthengisa, njengabaphembeleli bemithombo yeendaba zentlalo (23%) kunye nosaziwayo (19%). Kwakhona, uGen Z watyhilwa njengoyena mntu uthembayo phantse kuwo onke amacandelo kwihlabathi liphela.
Ibali elifanayo lidlalwa xa kuvavanywa ukuthembela kwiindidi ezahlukeneyo zolwazi olunxulumene nokuhamba. Ukulinganiswa kwabathengi (iipesenti ezingama-52) kunye nokuphononongwa kwabathengi okubhaliweyo (iipesenti ezingama-46) zezona zithembekileyo kubakhenkethi eMelika. Nangona kunjalo, isatifikethi somntu wesithathu (34%), iifoto zeemveliso ezinje ngamagumbi ehotele anikezelwa ziinkampani zohambo (iipesenti ezingama-37), kunye nenqanaba lomntu wesithathu njengeenkqubo zeenkwenkwezi zehotele (39%) zatyhilwa njengezona zingathembakaliyo.
Ukongeza ekuchongeni izikhewu kuthembekile, uphando luye lwaveza ubungqina bokuba ukuthembela kuchaphazela ngokuthe ngqo indlela yokuziphatha yokuthenga. Ngenxa ye-COVID-19, phantse isiqingatha (49%) sabakhenkethi baseMelika namhlanje, umzekelo, baboniswa ukuba babeke phambili ukuthembela kuzo zonke ezinye izinto xa bekhetha umthengisi wezohambo. Uninzi lwabahambi luye lwathi, xa ukuthembana kukhona, baya kuthathela ingqalelo ukuthenga izinto ezininzi ezinxulumene nokuhamba (50%), ukuphucula ipakethe yabo (40%) kunye nokuthenga izinto ezingahambelani nohambo ezinje ngamakhadi etyala (29%).